Inkcazo eqinileyo - iKhomistry Glossary
Inkcazo eqinileyo kunye nemizekelo yeSayensi
IKhemistry Glossary Inkcazo ye-Solid
Ubomeleleyo yimeko yemeko ebonakalayo yintlukwano ehlelwe ngendlela yokuba isimo nesimo saso sizinzile. Amalungu esigxina avame ukupakishwa ndawonye kakhulu kunamaqhekeza kwi- gas okanye i- liquid . Isizathu esomeleleyo sinesimo esiqinileyo kukuba i-atom okanye i-molecule zixhunyaniswe ngokuqinileyo ngokubambisana kweemichiza. Ukubambisana kunokuvelisa i-lattice rhoqo (njengoko kuboniswe kwiqhwa, isinyithi, kunye ne-crystals) okanye i-amorphous shape (njengoko kubonwe kwiglasi okanye i-carbon amorphous).
Isisiseko esinye sezimeko ezine ezisisiseko zengxaki, kunye neengxube, i-gases kunye ne-plasma.
I-physics yommandla ozinzileyo kunye ne-static state chemistry ngamasebe amabini enzululwazi azinikele ekufundeni iipropati kunye nokuhlanganiswa kwezinto ezinamandla.
Imba enesimo esichaziweyo kunye nevolumu iqinile. Kukho imizekelo emininzi:
ikhonkco yentsimbi ye-aluminium (okanye nayiphina isinyithi kwindawo yokushisa ngaphandle kwe-mercury)
idayimani (kunye nezinye iicristal)
Imizekelo yezinto ezingekho iziqulatho zibandakanya amanzi amanzi, umoya, i-crystals, i-hydrogen gesi kunye nomsi.
Iintlobo ezahlukeneyo zeemichiza zamakhemikhali ezidibanisa iinqununu kwiziqulatho zinamandla ezinamandla ezingasetyenziselwa ukuhlukanisa iziqulatho. Iibhondi ze-Ionic (umzekelo kwitafile zetyuwa okanye i-NaCl) zibophelelwano ezinamandla ezivame ukuphumela kwizakhiwo ze-crystalline ezingachaphazelayo kwiifomu zamanzi. Iibhondi ezi-covalent (umz., Kwishukela okanye i-sucrose) zibandakanya ukwabelana kweefowuni ze-valence.
Iifowuni zinyoni zibonakala zihamba ngenxa yokubambisana kwezetsimbi. Iimpawu ze-Organic zihlala ziqulethe izibophelelo kunye kunye nokusebenzisana phakathi kweengxenye ezihlukeneyo ze-molecule ngenxa yemikhosi yakwa-van der Waals.
Iiklasi ezinkulu zeziqulatho ziquka:
Amaminerali - Amaminerali ayenzibonda zendalo ezakhiwe ngeenkqubo ze-geological. Iimaminerali zinesakhiwo esifanayo. Imizekelo ibandakanya idayimani, i-salts kunye ne-mica.
Izitshixo - Izinyithi eziqinileyo ziquka izinto (umzekelo, isilivere) kunye nama-alloys (umz., Insimbi). Iimpawu zinobucayi, i-ductile, i-malleable, kunye nabaqhubi abakhulu bokushisa nombane.
Iiceramics - iiCeramics zizinto ezinobumba ezinobumba obungasemgangathweni, ngokuqhelekileyo i-oxides.IiCeramics zihlala zikhuni, ziphazamisekile kwaye zikhuselekile.
Iimpawu zobisi - Izilwanyana ezinobumba ziquka iipolymers, i-wax, iiplastiki kunye nemithi. Uninzi lwalezi ziqhamo zi-insulators zomshushu. Ngokuqhelekileyo banamaqondo amanci ancibilikiweyo kunye abilisayo kunezinyithi okanye iiceramics.
Izinto ezidibeneyo - Izinto ezidibeneyo zizinto eziqulethe ezimbini okanye ngaphezulu. Umzekelo uza kuba yiplastiki ephethe i-carbon fibers. Ezi zinto zivelisa iipropati ezingabonakali kwizinto ezisuka kumthombo.
I-Semiconductors - Iimveliso ezixutywayo zinezixhobo zombane eziphakathi phakathi kwabaqhubi kunye nabasisi. Iziqulatho zingaba zizinto ezicocekileyo, izixhobo, okanye izinto eziphambili. Imizekelo ibandakanya i-silicon kunye ne-gallium arsenide.
I-Nanomaterials - Ii-Nanomaterials ziyingcinci ezincinci zincinci kwisayizi ye-nanometer. Ezi ziqulatho zingabonakalisa iimpawu ezihlukeneyo zomzimba kunye neekhemikhali ezivela kwiinguqu ezininzi zezinto ezifanayo. okanye umzekelo, i-gold nanoparticles ibomvu kwaye iyancibilika kwiqondo lokushisa elingaphantsi kunegolide yesimbi.
Ii-biomaterials - Ezi zinto zizinto zendalo, ezifana ne-collagen kunye nethambo, ezihlala zikwazi ukuzinza.
Ukulinganisa Inkcazo kwiSayensi
Inkcazo yeRadio Definition
Yintoni i-Indicator yeKhemikhali?
Isisombululo seSingsaturated Definition
Uhlalutyo olulungileyo Inkcazo (i-Chemistry)
Yayiyintoni iprojekthi yokuqhwabalala?
I-Nucleation Inkcazo (iKhemistry kunye neFiziki)
Inkcazo yeAromatic Definition
I-Atomic Weight Definition
Iingoma zePunk Rock Holiday
Iingcebiso zeQela lokuFunda
Aartis (iiNgoma) kuma-Hindu oothixo kunye noodadekazikazi
I-Biography kunye neProfayili kaJon Jones
Ngaba iiSikethi zeeSikethi zivunyelwe njenge-Carry-On Luggage On Airplanes?
I-Pine Manor College Admissions
Imizila - Imveli yamandulo eyenziwa ngabantu kunye neendlela eziSebenzayo
Imbali Yemibala Yeencwadi Zomdlalo WeeComic kunye neeNdaba zeCapepe Strips
Ubungqina bobuGalazi bukaJoel Rifkin
Indlela yokusondela kwiGalari yezobuGcisa ngeePayipi zakho
Imiyalelo yoMlilo Obomvu
IYunivesithi yaseWashington eBothel Admissions
I-Curtis Institute of Music Admissions
Isingeniso kwi-Theorem yeCoase
Sebenzisa i-VBA Macro Ukutshintsha imvelaphi yeSeli
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: I-Pensare
Inkxaso yoBomi kunye ne-Euthanasia e-Islam
I-Charter ye-Urbanism entsha
Yonke NgeMarxist Sociology
Fumana iNcazelo yokuBumba
I-Easy Drawing Lesson kwaBaqalayo
Ixesha lezithuba zomsebenzi wokuphulaphula i-Quiz Comprehension
Ukusebenzisa i-Fake Shure Microphone
'Umfana osemagqabini asePri Pajped' Quotes
Iindlela ezininzi zeHlabathi
Zheng Shi, Pirate Lady waseChina
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweenguqu ezizimeleyo kunye ezixhomekeke kuyo?